प्रविधि – Page 8 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ००:२७ English
गीतसंगीत पाराखीका लागि आयो मोबाईल एप्स २२ भाद्र २०७२, मंगलवार २२:०६
सद्भाव खल्बल्याउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह २१ भाद्र २०७२, सोमबार २१:३८
काठमाडौँ, २१ भदौ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सामाजिक सद्भाव खल्बलिने तथा विभिन्न जातजाति, धर्म, संस्कृति, भाषा,..
बजारमा उपलब्ध छ रोजाई अनुसारको स्मार्टफोन ८ मंसिर २०७१, सोमबार २३:२०
काठमाडौं । प्रविधिमा रमाउनेहरुका लागि अत्याधुनिक फोन बोक्ने रहर अब नौलो रहेन । बरु महिनैपिच्छे बजारमा आउने अत्याधुनिक स्मार्टफोन मध्ये कुन छान्ने उपभोक्तालाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ । टेकराडार वेवसाइटले दस स्मार्टफोनका मोडललाई अहिलेको उत्कृष्ट दस स्मार्टफोन भनी वर्गीकरण गरेको..
निःशुल्क प्रयोग गर्नुस एन्टिभाइरस ३० आश्विन २०७१, बिहीबार ००:४७
काठमाडौँ, । तपाईको कम्प्युटर तथा ल्यापटपलाई एन्टिभाइरसले सुरक्षा दिने काम गरेको हुन्छ जहाँ उसले कम्प्युटरलाई बाहिरको दुश्मन जस्तै भाइरस, बगका साथसाथै अनलाइनमा हुने थुप्रै हमलाबाट बचाउँछ । आफ्नो कम्प्युटर तथा ल्यापटपलाई यस्ता थुप्रै भाइरसहरुबाट बचाउनका लागि समय समयमा अनलाइनले..
अमेरिकी सरकारविरुद्ध ट्विटरको मुद्दा २७ आश्विन २०७१, सोमबार ०३:४५
एजेन्सी । ट्विटरले अमेरिकी सरकारविरुद्ध निगरानी कानुनलाई लिएर मुद्दा दर्ता गरेको छ । ट्विटरले मंगलबार क्यालिफोर्नियाको एक अदालतमा अमेरिकाको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबिआई) र न्याय विभागविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । अमेरिकी सरकारले सरकारी निगरानीसँग सम्बन्धित..
मानिसले चपाउँदा बिजुली निस्किन्छ ! ७ आश्विन २०७१, मंगलवार ०९:२६
क्यानडाका बैज्ञानिकहरुले मानिसले चपाउँदा बिजुली निकाल्न सकिने मेसिन बनाएका छन् । मानिसले चपाउँदा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियालाई उक्त मेसिनले बिजुलीमा बदल्न सक्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । तर कुनै पनि कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने स्तरमा बिजुली उत्पादनका लागि भने अहिले तयार भएको मेसिन..
क्यान सफ्टेक मेला काठमाडौंमा २६ भाद्र २०७१, बिहीबार ०८:५१
काठमाडौं, २६ भदौ । कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालको क्यान सफ्टेक मेलाको सातौं संस्करण बिहिबारबाट सुरु हुने भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने क्यान सफ्टेकमा सफ्टवेयर सोलुशन, कम्युनिकेसन, सर्भिसहरुको प्रर्दशनी हुने छ । ५५ कम्पनीका एक सय ४२ स्टल मेलामा रहने छन् । मेलाका १ लाख..
एनसेलको डाटा शुल्क कम हुँदै जाने १८ भाद्र २०७१, बुधबार २२:२४
काठमाडौं, १८ भदौ । एनसेलले प्याक खरिद नगरी इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकको सुविधाको लागि सुपरनेट नामक नयाँ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत ग्राहकले अब रु १ प्रति एमबीसम्मको दरमा डेटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सुपरनेट बुधबारबाट शुरु भई तीन महिनासम्म लागु हुनेछ। यसमा डेटा भोल्युमलाई ६ वटा..
आइफोन ६ सेप्टेम्बर ९ मा आउने १७ भाद्र २०७१, मंगलवार ०७:४३
काठमाडौं । एप्पलको आइफोन सिरिज आइफोन सेप्टेम्बर ९ मा सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले स्रोतको हवाला दिंदै यस्तो दाबी गरेका हुन् । एप्पलले दुई बर्ष अघि आइफोन ५ सार्वजनिक गरेको थियो । तर, आइफोन ५ ले ग्राहकको अपेक्षा पूरा नगरेको भन्दै कम्पनीको आलोचना भएको थियो..
सामसुङ मोबाइल सेटमा विशेष छुट ५ श्रावण २०७१, सोमबार १८:३६
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र सामसुङको नेपाल अधिकृत विक्रेता इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्विसेज बीचमा सामसुङ कम्पनीका छ प्रकारका मोबाइल सेटमा विशेष छुट दिने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कम्पनीका सिम कार्ड तथा सामसुङका मोबाइल सेटको खरिदमा १५ प्रतिशत छुट तथा छ महिना..
भगवतीमा वाइफाई इन्टरनेट सुविधा २६ असार २०७१, बिहीबार १७:०७
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको भगवतीमा वाइफाई सुविधा पुगेपछि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु लाभान्वित भएका छन् । भगवती–७ घट्टका युवा मोहन कार्की (लक्ष्मण) ले भगवती गाविसको मैदानमा सञ्चालनमा ल्याएको कनेक्सन कम्प्युटर इन्टिच्युटमार्फत वाइफाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएपछि..
नयाँ सोसियल साइटको विकास २५ असार २०७१, बुधबार ०७:४५
काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनी सगुन इंकले फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्स एप, स्न्याप च्याट, इन्स्टाग्राम सहितका इन्स्यान्ट मेसेजिङसाइटको विशेषता भएको सोसियल कम्युनिकेसन साइट सगुन डटकम लन्च गरेका छन्। द एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका (एएनए) को ३२औं डिसी..
फेसबुक प्रयोगकर्ताको गोप्य परीक्षण १७ असार २०७१, मंगलवार ०७:१९
लन्डन, १७ असार । शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले आफ्ना सात लाख प्रयोगकर्तामाथि बिना जानकारी गरेको मनोवैज्ञानिक परीक्षणको व्यापक आलोचना भएको छ। यो परीक्षणअन्तर्गत फेसबुकका ती प्रयोगकर्ताको नकारात्मक सामग्रीमा छेडखानी गरिएको थियो र प्रयोगकर्ताले यसलाई कसरी लिन्छन् भनेर..
मोबाइल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या साढे दुई लाख १३ असार २०७१, शुक्रबार १८:४४
बाँके, १३ असार । बाँके जिल्लामा मोबाइल प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या साढे दुई लाख नाघेको छ । नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा दुई लाख ५७ हजार १ सय ९९ जना मोबाइल ग्राहक छन् । ३५ लाख ४६ हजार ६ सय ८२ जनसङ्ख्या रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा मोबाइल बोक्ने ११ लाख १० हजार ९..
इन्टरनेट डोमेन नाम र नम्बरको व्यवस्थापन अब आइक्यानले गर्ने १२ असार २०७१, बिहीबार १३:२९
काठमाडौं, १२ असार । हाल प्रयोग भइरहेको इन्टरनेटको डोमेन (डट जिओभी, डट ओआरजी आदि नाम) नाम र नम्बरको दर्ता व्यवस्थापन अब आइक्यान (इन्टरनेट कर्पाेरेसन फर असाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स) संस्थाले गर्ने भएको छ । सञ्चार र इन्टरनेटसम्बन्धी आइक्यानको संयुक्त अधिराज्यमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय..
टेलिसेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएनन् ४ असार २०७१, बुधबार ११:०२
इलाम, ४ असार । इलाम जिल्ला हुलाक कार्यालयअन्तर्गतका आठ स्थानमा सञ्चालित टेलिसेन्टर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध नगराउँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । टेलिसेन्टरका लागि २४ सैँ घण्टा विद्युत् सेवा र दक्ष प्राविधिकको अभावमा प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् ।..